Indawo yokugcina ubungqina-i-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kweNdawo kunye nabaGcini bakaRhulumente beBhanki
ikhaya / baqinisekiswa
UPeter noVeer bobabini banobuchule kakhulu kwaye ngokukhawuleza neempendulo zabo kwimibuzo yethu. Abakhange baqiniseke nje ukuba sifumana impendulo kwimibuzo yethu kodwa ulwazi oluchanekileyo lwalunikezelwe ukwenza isigqibo esingcono. Kakuhle.
Ndaphathwa ngentlonipho kwaye ndahlala ndiziva ndinjalo kwelicala lam. Yayisisigqibo esihle kum ukuqesha igqwetha kule femu. Mkhulu kwaye ndingabacebisa.
Y'all wenze umsebenzi oncomekayo ndiyayibulela kakhulu ukuba nabani na udinga igqwetha ngokuqinisekileyo ndiyithumele kwi-firm.
Wonke umntu obandakanyekayo kwityala lam wayenonophelo, efundisa kakhulu kwaye enolwazi oluthe kratya endenze ndaziva ndizithembile kakhulu xa ndenza izigqibo zam. Uza kuba sezandleni ezilungileyo kunye noPatel, uSoltis noCardenas!
Ndaphathwa ngentlonipho ngumntu wonke e-PATEL, SOLTIS NE CARDENAS. Ihlala ihlala ihlaziyiwe kwimeko yam ewe. Esona sigqibo silungileyo! Amava am amelwe yi-PATEL, SOLTIS neCardENAS anokuchazwa kuphela njengo- "Instant kunye noncedo olunamandla oluyimfuneko kakhulu"
Ndithathe esona sigqibo sihle sokuqesha iAtrea uCardenas kunye nefirm. Babengabantu ababalaseleyo ukuba baphathe ityala lam. Ndingathi igqwetha likaCardenas kunye neqela lakhe eliqinisekileyo liya kuba ligqwetha lakho kunye netyala lakho.
Ndinqwenela ukuba anikeze ngolwazi oluthe kratya malunga nayo yonke inkqubo. Kwakufuneka ndenze into kuGoogle kwaye igqwetha lam alizazi ezinye iimpendulo. Kakhulu
Mhle, ndingaphinda ndizisebenzise xa kufuneka.
Ixabiso lalinengqondo kakhulu-Mnu. USoltis wayesoloko ephendula ii-imeyile zam kunye nemibuzo- wayeluncedo kakhulu kwaye wenza inkqubo yalula. Kakuhle kakhulu
Ngokuqinisekileyo !!! Inkonzo egqwesileyo !!! Njengoko benditshilo lo mthetho Firm awusebenzi kum kuphela ... kodwa nam ... undigcina ndihlaziywa kwaye undicebisa ngento ekufuneka ndiyenzile ukuya phambili. Obalaseleyo oLwazi kunye noLwazi kakhulu ecaleni kwam. Ndonwabe kakhulu kwaye ndizimisele ukucebisa ukuba umthetho wam uqiniseke kumalungu osapho lwam. Enkosi.
Ndiphathwe ngentlonelo enkulu kwaye bendonwabile sisiphumo kunye nenkonzo.
UDerek Soltis wayeligqwetha elalimele kum, kwaye emangalisa. Wayesoloko enomdla kwingcaciso yakhe, ephendula yonke imibuzo yam, engakhawulezi nangantoni na, kwaye ke undenze ndaziva ndonwabile kulonto inezinto ezivuselela inkxalabo ngokubanzi. Ndasivuyela kakhulu isigqibo sam sokusebenzisa le femu yomthetho. Ndingacebisa le femu yomthetho, ngakumbi u-Derek Soltis kuye nawuphina umntu ocele ukumelwa ngumthetho kwityala abaligubungelayo. Uya kuphathwa ngentlonipho, uvelwano, kwaye uya kuziva unokholo kwizigqibo ozenzayo kuba uya kuba nalo lonke ulwazi olufunekayo ukwenza ukhetho olufanelekileyo.
Wayesenza kakuhle kwaye endimelele kakuhle. Ndingamcebisa.
Ndaziva ndenze isigqibo esikhulu sokuza kuwe. Yonke into, kubandakanywa nazo zonke izinto endizikhethileyo, zazibhalwe ngokucacileyo ngesiNgesi, kwaye yonke imibuzo yam yaphendulwa kwangoko okanye kwiiyure nje ezimbalwa, kwaye bendisoloko ndisexesheni kuyo yonke into. Ndingathi musa ukukhohlisa, yiza kuwe kuba uyayazi into oyenzayo kwaye ngaphandle kokuba ziingcali, unolwazi lokucacisa yonke into kwaye uyicacisele ngesiNgesi esingacacanga kwaye hayi fom esemthethweni, kwaye imibuzo yakho ihlala iphendulwa ngokukhawuleza.
Ndaphathwa ngentlonipho, ndahlala ndikhona kwelityala lam, ndaziva ndikhululekile ukuba ndenze isigqibo sokuqesha eli gqwetha. Igqwetha lam linyamekela zonke iinkcukacha kwaye lihlala lindigcina ndilungile kwaye ndinolwazi olufanelekileyo lokuthatha izigqibo ezifanelekileyo. Lilonke, yayingamava amahle, amnandi kakhulu.
Ndaphathwa ngentlonelo ephezulu. Ndinombulelo ongazenzisiyo kwiinkonzo zabo. Umhle! Ukucebisa kakhulu!
U-Becky Jones - Uhlaziyo lukaGoogle
Ndiphume nje emnxebeni kunye noDerek Soltis kwaye ndichukumisekile kwaye ndinombulelo kuba ndimfumene. Ndandinemibuzo embalwa yokuqala ngaphambi kokuba ndifike kuye kwaye wayiphendula NGOKUKHULU. Asingabo bonke abameli abaza kunyaniseka xa kukho into ekufanele ukuba iqhubeke phambili… .kodwa uDerek unyanisekile kwaye undenze ndaziva kamnandi. Ndingacebisa kakhulu le ofisi yezomthetho isekwe kwincoko yam noDerek. Unobubele, unyanisekile, uyacacisa, kwaye uyakhathala. Ngoku ndiyathemba ukuba ikhona into eyenzekayo apho ndifuna ukuqesha igqwetha kuba ndiza kuqesha uDerek ngokuqinisekileyo. Enkosi kakhulu ngengcebiso yakho Derek! Umzi mveliso ufuna abameli abaninzi njengawe 🙂 Uhlalutyo olusuka kuGoogle